Princess Cruises Anomhan'arira Mhosva zvakare muNyaya yekusvibisa Oiri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Princess Cruises Anomhan'arira Mhosva zvakare muNyaya yekusvibisa Oiri
Kuputsa Kufamba Nhau • Kurwisa • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Mufananidzo unofadza Sven Lachmann kubva kuPixabay
Muna 2016, mutongo wemhosva nomwe dzakakonzera chirango chemadhora mamiriyoni makumi mana chePrincess Cruises - chirango chikuru-chakamboitika chinosanganisira kusvibiswa kwechikepe nemaune. Sechikamu chechibvumirano chekukumbira, dare rakaraira chirongwa chemakore mashanu chakatariswa Environmental Compliance Chirongwa chaida kuongororwa kwakazvimirira nesangano rekunze uye dare rakagadzwa rekutarisa nzira dzekufamba dzeCarnival Corporation, kusanganisira Princess Cruises, Carnival Cruise Line, Holland America Line, Seabourn Cruises, uye AIDA.
Princess Cruise Lines akabvuma mhosva kechipiri mhosva yekutyora dare rainge rarairwa Environmental Compliance Program icho chaive chikamu chemitemo ye2016 mutongo wekusvibisa nemaune uye nemaune kuedza kuvhara zviito zvayo. Mhosva dzakakumbirwa naPrincess dzine chekuita neCaribbean Princess.
Pasi pechibvumirano chechibvumirano chitsva chakaziviswa muna Ndira 11, 2023, neDhipatimendi reJustice reUS, Princess akanzi abhadhare imwe miriyoni yemadhora faindi uye zvakare akafanirwa kutora matanho ekugadzirisa kuti chirongwa ichi chienderere mberi.
Chibvumirano chitsva ndechekutyora kwechipiri kwekuyedzwa kunobva muchibvumirano chekukumbira muna 2016. Muna 2019, Princess nekambani yevabereki Carnival Corporation vakarairwa kuti vamire pamberi pemutongi wemubatanidzwa weAmerica muMiami uyo akatyisidzira kumisa kushanda kwekambani iyi kubva kuUS nekuda kwekuyedza kuvhiringidza Chirongwa Chekuteerera Kwemamiriro ekunze. Muna Chikumi 2019, Princess naCarnival vakanzi vabhadhare chirango chemhosva yemadhora miriyoni makumi maviri pamwe chete netarisiro yakawedzerwa mushure mekubvuma kutyorwa kwekurangwa kunokonzerwa nevakuru vakuru vemaneja paCarnival.
"Injiniya anoridza muridzo" akashuma kuUS Coast Guard muna 2013 kuti ngarava yaishandisa "magic pombi" kurasa marara ane mafuta.
Sekureva kwemapepa akaiswa mudare, kuferefetwa kwakatevera kwakaratidza kuti Caribbean Princess yanga ichiburitsa zvisiri pamutemo kuburikidza nemidziyo yekupfuura kubva 2005, gore rimwe chete mushure mekunge ngarava yatanga kushanda uye kuti mainjiniya aitora matanho anosanganisira kumhanyisa mvura yegungwa yakachena kuburikidza nemidziyo yemuchikepe. gadzira rekodhi renhema rekuburitsa zviri pamutemo. Vaongorori vakapomerawo kuti injinjiniya mukuru uye mainjiniya wekutanga akaraira kuvhara, kusanganisira kubviswa kwepombi yemashiripiti uye kutungamira vari pasi kuti vanyepe kune vanoongorora kuUK nekuUS vakakwira ngarava mushure memushumo wemuridzo.
Pamusoro pekushandiswa kwepombi yemashiripiti kutenderedza chinoparadzanisa mvura ine mafuta nemidziyo yekutarisa zvirimo, ongororo yeUS yakafumura mamwe maitiro maviri asiri pamutemo paCaribbean Princess pamwe nedzimwe ngarava ina dzePrincess, Star Princess, Grand Princess, Coral Princess. , uye Golden Princess. Izvi zvaisanganisira kuvhura vharuvhu yemvura yemunyu apo tsvina yebilge yaigadziriswa neinoparadzanisa mvura ine mafuta uye yeoiri yemukati memonitor kudzivirira maalarm uye zvakare kubuda kweoiri yemvura yebilge ichibva mukufashukira kwematangi emvura yegrey ichipinda mumichina nzvimbo mabilges.
Panguva yekupomerwa mhosva kwekutanga muna Zvita 2016, Mutevedzeri weGweta Guru Cruden akati "Kusvibiswa kwenyaya iyi kwakakonzerwa nevanopfuura vakashata muchikepe chimwe chete. Zvinoratidza zvakashata kwazvo patsika nehutungamiriri hwaPrincess. Iyi ikambani yaiziva zviri nani uye yaifanira kunge yakaita zvirinani. "
Muna Chikumi we2019, Carnival yakabvuma kuti yaive nemhosva yekutyora katanhatu pakuongororwa. Izvi zvaisanganisira kuvhiringidza kutarisira kwedare kwekuongorora nekutumira zvikwata zvisina kutaurwa kungarava kuti zvigadzirire kuongororwa kwakazvimirira kuti zvidzivise zvakawanikwa zvakashata. Pamusoro pefaindi yemadhora miriyoni makumi maviri, manejimendi eCarnival akabvuma basa, akabvuma kugadziridza kuedza kwekambani kutevedza kwekambani, kutevedzera zvinodiwa zvekushuma, uye kubhadhara mamwe maodhita akazvimirira.
"Kutanga negore rekutanga rekuedzwa, pane zvakadzokororwa zvakawanikwa kuti chirongwa chekuongorora chemukati chekambani chaive uye hachina kukwana," akadaro Dhipatimendi reJustice sechikamu chechikumbiro chitsva chemhosva.
Muongorori akazvimirira webato rechitatu uye akagadzwa nedare akazivisa kudare kuti kutadza kuri kuramba "kunoratidza chipingamupinyi chakadzama: tsika inotsvaga kudzikisa kana kudzivirira ruzivo rwusina kunaka, rusina kugadzikana, kana kutyisidzira kambani, kusanganisira hutungamiriri hwepamusoro. .” Nekuda kweizvozvo, muna Mbudzi 2021, Hofisi yeProbation yakapa chikumbiro chekubvisa bvunzo.
Princess naCarnival vakabvuma muchibvumirano chitsva chekukumbira kutadza kumisa nekuchengetedza hofisi yakazvimirira yekuferefeta. Princess akabvumawo kuti vaongorori vemukati havana kubvumidzwa kuona huwandu hwekuferefeta kwavo, uye kuti kunyorwa kwekuongorora kwemukati kwakakanganiswa uye kunonoka nevatungamiriri.
Carnival yakarairwa kuti igadzirise zvakare kuitira kuti hofisi yayo yekuferefeta iko zvino inoshuma zvakananga kukomiti yeCarnival's Board of Directors. Princess akarairwa kuti abhadhare imwe miriyoni imwe faindi yemhosva uye akafanirwa kutora matanho ekugadzirisa kuti ave nechokwadi chekuti iyo neCarnival Cruise Lines & plc inogadza uye kuchengetedza yakazvimirira yemukati hofisi yekuferefeta. Dare richaramba richiita misangano yekota yega yega kuti ive nechokwadi chekutevedzwa.
Mamwe ruzivo nezve Princess Cruises